Portable စပေးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကတော့ အင်တာနက်ဆိုင်တွေမှာ တစ်ချို့ program တွေကို တင်ခွင့်ပိတ်ထား လို့ပါ . အဲ့ဒီ့အတွက် အသုံးပြုတဲ့သူတွေ အနေနဲ့က အတော်လေး ကသိကအောင့်နိုင်လို့ portable တွေ တင်ပေးနေတာပါ . အဲ့ဒီ့လို အသုံးပြုတဲ့အတွက် အင်တာနက်ဆိုင်မှာ သွားပြီး သုံးစွဲတဲ့ ညီအစ်ကိုများအတွက် အတော် အဆင်ပြေတာကို တွေ့ရပါတယ် . အဲ နောက်တစ်ခု ထပ်ဖြစ်တာက အင်တာနက်ဆိုင်မှာ လုပ်တဲ့ ညီအစ်ကိုများက လာပြီး အကူအညီထပ်တောင်းတယ် . ဘာလဲဆိုရင် ကျွန်တော့်တို့ဆိုင်မှာ portable နဲ့ flash drive တွေ ထိုးထိုးပြီး သုံးနေကြတယ်တဲ့ . အဲ့ဒါ portable တွေ သုံးလို့မရအောင် ပိတ်လို့ရတဲ့ နည်းရှိရင် ပြောပြပါလားတဲ့ . ပြောပြပြန်ရင်လဲ သုံးစွဲသူတွေအနေနဲ့ အခက်အခဲထပ်ဖြစ်ရဦးမယ် . ပြီးတော့ အဲ့လို ပိတ်တဲ့အတွက်လဲ အဆိုပါအင်တာနက်ကို နာရီနဲ့ ဆိုင်မှာ သုံးစွဲတဲ့ ညီအစ်ကိုတွေက အစ်ကိုရေ ကျွန်တော်တို့ကို portable သုံးစွဲလို့မရအောင်လို့ ပိတ်ထားတယ် . အဲ့ဒါဘယ်လိုကျော်ရဦးမလဲလို့ မေးကြမှာပါပဲ . အဲ့ဒီ့တော့ ကျွန်တော့်အနေနဲ့က ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမှန်းကို မသိတော့ပါဘူး .. ဟိုပုံပြင်ထဲကလို ဖြစ်နေပြီဗျာ ..
ဟိုးအရင်တုန်းက နှစ်နိုင်ငံ စစ်ဖြစ်တယ်တဲ့ .. ဒီဖက်က ဘုရင်က သစ္စာပြုလိုက်တယ် . ကျွန်တော်မျိုးသည် မိဘများအား မိမိအသက်ထက် ချစ်မြတ်နိုးပါတယ် . ဒီမှန်ကန်တဲ့ သစ္စာကြောင့် ယခုတိုက်သော တိုက်ပွဲ အောင်မြင်ရပါလို၏။တဲ့ . အဲ့တော့ သစ္စာတစ်ရာက မှန်နေတော့ သူက စစ်နိုင်ကိုနိုင်မှာလေ . ဘုရားက သူတောင်းတဲ့ဆိုကို ပြည့်စေလို့ ပေးလိုက်တယ်တဲ့ .. နောက်တစ်နိုင်ငံကလဲ အဲ့လိုပဲ ဆုတောင်းတယ် . ကျွန်တော်သည် ၅ ပါးသီလကို ခါးဝတ်ပုဆိုးလို မြဲမြံရုံသာမက မိဘနှစ်ပါးအားလဲ ယခုအချိန်အထိ ဦးထိပ်တွင် ထားရှိပါသည် . တစ်သက်လုံး စိတ်ဆင်းရဲမှု မြှူမှုံမျှလောက်ကို မပေးခဲ့ပါ . ဒီမှန်ကန်တဲ့ သစ္စာစကားကြောင့် ယခုတိုက်သော စစ်ပွဲအောင်မြင်ရပါလို၏။တဲ့ . အဲ့ဒီ့မှာ ဇာတ်လမ်းက စတော့တာပဲ . သူဆိုတဲ့ သစ္စာစကားကလဲ မှန်တယ်လေ . နောက်ဆုံးတော့ ဘုရားက သူတောင်းတဲ့ သစ္စာတရားကို ဘယ်လိုလုပ်လိုက်တယ်လို့ သူငယ်ချင်းလို့ထင်လဲ . နှစ်ယောက်စလုံးက မှန်ကန်တဲ့ သစ္စာကို ဆိုကြတာပါ . ဒါပေသိ စစ်ပွဲမှာ အနိုင်အရှုံးဆိုတာ တစ်ခုမဟုတ်ရင် တစ်ခု ရမှာပဲ . နိုင်ရင်နိုင် မနိုင်ရင် ရှုံးပဲ . အခုလဲ အဲ့လိုဖြစ်နေပြီ .
အဲ့တော့ ဒီလိုလုပ်ဗျာ အင်တာနက်ဆိုင်ဖွင့်တဲ့ သူများကလဲ portable ကို သုံးစွဲတာကို ဘယ်လိုပိတ်ရမလဲဆိုတာကို မမေးတဲ့အပြင် portable သုံးစွဲခွင့်လောက်တော့ သုံးစွဲသူတွေကို ခွင့်ပေးလိုက်ပါ . ကျွန်တော်ကတော့ အဲ့ဒီ့ portable သုံးစွဲတာကို ဘယ်လိုပိတ်ရမလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို ပြန်မဖြေပေးတဲ့ အတွက် နားလည်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် . ကျွန်တော့်ဆိုက်ကို လာကြည့်တဲ့ သူထဲက 90% လောက်ဟာ အင်တာနက်ဆိုင်တွေမှာ လာပြီးသုံးတဲ့သူက များတဲ့အတွက် အဆိုပါ မေးခွန်းကိုတော့ဖြင့် ကျွန်တော် မဖြေပေးတော့ပါ . အရမ်းသိချင်နေရင်တော့ google ကနေ ပဲ ရှာပြီး ကိုယ့်ဟာကို လေ့လာလိုက်ပါ .
ကျွန်တော့်ကို commant ရေးပေးခဲ့ကြပါဦး . portable သုံးစွဲခွင့်ကို ပိတ်ချင်တဲ့သူနဲ့ ပိတ်ချင်တဲ့သူတွေ တစ်ခုခု ရေးပေးခဲ့စေချင်ပါတယ် . အဲ့ဒါမှ ကျွန်တော် ရေးသင့် မရေးသင့် ဆုံးဖြတ်လို့ရမှာပါ ..
Posted by ညီနေမင်း at 2:55 AM
royallyre@gmail.com September 21, 2009 at 3:42 AM
သုံးတဲ့သူအပေါ်မှာမူတည်တာမဟုတ်လားဗျာ ပညာကဆိုးတာမှမဟုတ်တာ ကိုညီနေမင်းအနေနဲ့ ပညာတွေဖြန့်ပေးနေတယ်ဆိုတာ မကောင်းအောင်လုပ်တာမှမဟုတ်တာ ဒါလဲဒါနမလုပ်လားဘက်လိုက်တယ်ဘက်မလိုက်ဘူးဆုံးဖြတ်စ၇ာမှမလိုတာဗျာ ဒိသာပါမောက္ခတွေဟာကိုယ်ဆီလာတဲ့ပညာသင်တွေကို ၇န်သူမင်းအချင်းချင်းဆိုပြီးညင်းလွှတ်တာမရှိသလို ဆ၇ာဝန်တွေဆို၇င်လဲ ကိုယ်ဆီလာတဲ့လူနာကိုကုပေးတာပဲလေဗျာ ကိုညီနေမင်းအနေနဲ့ ဆက်လက်ဖြေကြားသင့်တယ်ထင်တာပဲ
mr.designer September 21, 2009 at 3:50 AM
protable ကို ပိတ်တဲ့နည်း မပြောပြစေလိုပါ ကိုညီရေ။
ဘာ portable မှဘယ်သူမှသုံးမနေတော့ပါဘူး...
မင်ကနော် September 21, 2009 at 7:02 AM
လူဆိုတာ စိတ်ကောင်းထားတတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ အလှူတွေထဲမှာ ပညာအလှူက ပိုမြင်မြတ်ပါတယ်။
ဒီတော့ အပိတ်ရှိရင် အဖွင့်ရှိစမြဲမို့ နှစ်မျိုးလုံးကို တင်ပြသင့်ပါတယ်။
cupid@pma September 21, 2009 at 8:18 AM
ကျွန်တော့ အနေနဲ့ ကတော့ အင်တာနက်ဆိုင်တွေမှာ ဟိုဟာပိတ် ဒီဟာပိတ်တွေမလုပ်သင့်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်
website တွေက MPT ကပိတ်.. နည်းပညာပိုင်းတွေက သုံးတဲ့ဆိုင်က ပိတ်ဆိုရင်...
အင်တာနက်ဆိုင်ကို လာသုံးတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ ပညာကတော်တော်လေး တိုးတက်မယ့်လမ်းကတော့မမြင်မီတော့ပါဘူးဗျာ...အစ်ကို့အနေနဲ့ portable ပိတ်နည်းကို တင်တော့တင်သင့်ပါတယ် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပညာရတာပေါ့...
ဟုတ်ပါတယ် ဖွင့်သုံးခွင့်ပေးသင့်တယ် လို့ထင်ပါရဲ့ ဒါပေမယ့်လည်း အင်တာနက်ဆိုင်ဖွင့်သူများအနေနဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ပါလာမှာကို စိုးရိမ်တတ်ကြတော့လည်း........
ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ် သုံးတဲ့ဘက်က ထောက်ခံလိုက်ပါတယ် ဒါပေမယ့် နည်းတော့ သိသင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ် ဒါမှ ပိတ်ထားရင် ဖွင့်ရမှာကိုသိမှာပေါ့ ဒီတိုင်း ထင်တာရေးပေးတာပါနော်
nweminthit September 21, 2009 at 10:21 AM
မှန်နေတာတွေပါလား ပြောသူတွေလဲ မှန် ပို့စ်ရေးထားတာလဲ အကုန်မှန်ဗျ။ကျနော် ပုဂ္ဂလိက စိတ်နဲ့ဆိုရင် မပေးနဲ့ဗျာ။စေတနာ မှန်တယ် ထားဦး ..အများ အကျိုးရှိမယ့်ဘက်ကို ဦးစားပေးသင့်တယ် ထင်ပါတယ်။
ပေးဆပ်သူ September 21, 2009 at 10:32 PM
သေးလားဗျာ...ကြောက်ရင်...deep freeze သုံးပေါ့ဗျာ့
အကိုညီနေမင်း...ပြောခဲ့သလိုပဲ..သိချင်ရင် Google မှာ
ကောင်းမြတ်သူ September 23, 2009 at 2:17 AM
ဆရာကို တောင်းဆိုလိုက်တာ ရွာကိုပျက်ကရော..
ကျွန်တော် လည်း အစ်ကိုပြောတဲ့ Google အားကိုးနဲ့ အဆင်ပြေနေပါပြီ..
ဒါပေမယ့် ပညာဆိုတာ ပြောပြသင့်ပါတယ်အစ်ကိုရ..
ပိတ်ထားတာ သိမှ ဖွင့်လို့ရမှာပေါ့.
ကျွန်တော့် အမြင်ကတော့ ဖြေကြားသင့်ပါတယ်.ခင်ဗျ
ငပိန်းလေး September 23, 2009 at 10:30 AM
ဟုတ်ကဲ့ဗျာ မဆီမဆိုင် ဝင်ပြီးပြောလိုက်ဦးမယ် လောလောဆယ်တော့ ကျွန်တော်က ကိုယ်ပိုင်သုံးနေတဲ့သူပေါ့ :-) မြန်မာမှာဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်လည်း နက်ဆိုင်ပဲပြေးရမှာ :P အခုကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာတောင် ကျွန်တော်က portable လေးတွေပဲသုံးတယ် ။ သုံးရတဲ့သူအတွက် အဆင်ပြေသလို စက်မှာလည်း ဝန်မများဘူးလေ ။ အဲ့ဒါကိုမှ အင်တာနက်ဆိုင်က ပိတ်နေဦးမယ်ဆိုရင်တော့ ဖွင့်မနေပါနဲ့တော့ဗျာ ။ ကိုယ်ပိုက်ဆံရဖို့တစ်ခုထဲ ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ အနာဂတ်မှ တိုးတက်ဖို့ဆိုတာ ဝေလာဝေးပဲ :(
soezaw November 8, 2009 at 6:04 AM
ကျွန်တော်ကတော့မပြေညပြစေလိုပါ။ဒီ portable သုံးလို့ဆိုင်ရှင်တွေမှာပြောပလောက်အောင်မထိခိုက်သွားပေမဲ့သုံးစွဲသူတွေအတွက်တော့တော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်